Soo dejisan DVD Shrink 3.2.0.15 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariCD & DVD-ga ripperDVD Shrink
Bogga rasmiga ah: DVD Shrink
DVD qali – software ah in la abuuro hayaan ee DVD. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u gubaan oo la abuuro nuqul ka mid ah DVD isticmaalaya software-ka loo qorsheeyay in ay gubaan files on saxannada indhaha. DVD qali u saamaxaaya in ay badbaadin video files kuwaas oo ka difaacan koobiyeynta isticmaalaya algorithms dhisay-in ka. Software wuxuu kuu ogol yahay in la yareeyo xajmiga files video by yahay riixo. DVD sidoo kale loo yareeyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan a collection of files ka disk hore iyo nuqul ka qaybaha lagama maarmaanka ah ee video files.
Badbaadiya oo video files kuwaas oo aad koobi ilaaliyo
Compression ee size file
Kobigareynta ka mid ah qaybaha lagama maarmaanka ah ee video files
Soo dejisan DVD Shrink
Faallo ku saabsan DVD Shrink
DVD Shrink Xirfadaha la xiriira